Hindise xeer cusub oo ku saabsan ciqaabta dad-xasuuqa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirada dadkii 1994 lagu xasuuqay dalka Ruwaanda. Sawirle: Steve Terrill/Scanpix.
Hindise xeer cusub oo ku saabsan ciqaabta dad-xasuuqa
La daabacay tisdag 25 februari 2014 kl 16.23
Dowladda Iswiidhen ayaa maanta baarlamaanka u gudbisey hindise sharci ama xeer cusub oo ku saabsan ciqaabta la mudan karo haddii lagu kaco falal dad-xasuuq, ama dembi laga galo bani-aadanimada amase dembiyo dagaal la geysto.
Hindisahaan waxaa ka mid ah in la dhaqangeliyo qodob cusub oo dembi ah; waa dembiga laga galo bani-aadanimada oo la jeediyey in ciqaabtiisu noqoto ugu yaraan afar sano ugu badnaana siddeed iyo toban sano oo xabsi ah ama xabsi daa’in. Xeer cusub oo si wanaagsan u waafaqaya qaraarada dad-xasuuqa iyo xeerar kale oo ku saabsan dembiyada dagaalka oo la doonayo in lagu beddelo kii horey u jirey oo lagu magacaabayey dembiyada xuquuqda dadka. Taas oo la micne ah in la ballaariyey xeerka hadda jira (waxaa sare loo qaaday ciqaabta ugu sarreysa ee dembiyada noocaan ah oo laga soo beddelay afar sano, lagana dhigay lix sano oo xabsi ah).
Waxaa kaloo la sii ballaariyey xeerka ku saabsan mas’uuliyadda qofka madaxda ah oo lagu xukumi karo in uu galay falkaas dembiga ah haddii uusan qofkaasi qaadin tallaabooyinka ugu habboon oo lagaga hortegi karo in dad isaga hoos yimaadaa ay galaan falalka dembiyada ah. Maxkamadaha iswiidhishku waxay hindisek u soo jeedinayaan in la dejiyo xeerka caam ah, oo micnehiisu yahay in awood loo yeelan karo in la xukumo ciddii falalkaas gasha ciiddii ay doonto ha ahaatee ama meeshii ay doonto ha joogeene.
Waxaa hindise lagu soo jeediyey in wax ka beddelka sharciyadaani ay dhaqangalaan 1da bisha Luulyo ee sannadkaan 2014.